CodeNet, chirongwa cheBMM chemuchina wekufunda masisitimu | Linux Vakapindwa muropa
IBM yakazarurwa munguva pfupi yapfuura chirongwa chake chitsva chakadaidzwa "CodeNet" izvo inovavarira kupa vaongorori dhata yakatarwa kuti vaedze kushandisa michina yekudzidzira michina kugadzira vashanduri kubva kune mumwe mutauro mutauro kuenda kune mumwe, pamwe nemajenareta uye vanoongorora kodhi.
CodeNet inosanganisira muunganidzwa wemamirioni gumi nemana emakodhi inogadzirisa 4053 zvakajairika zvirongwa zvehurongwa. Pakazara, iko kuunganidzwa kune mazana mashanu emamirioni emitsetse yekodhi uye inovhara mitauro makumi mashanu nemapfumbamwe, mitauro yemazuva ano yakadai seC ++, Java, Python, uye Go, pamwe nemitauro yenhaka, kusanganisira COBOL, Pascal, uye FORTRAN.
"Software irikudya nyika," akanyora muzvinabhizinesi anozivikanwa weAmerica Marc Andreessen muna 2011. Nekukurumidza kusvika nhasi: software inowanikwa mune zvemari mabasa uye hutano, mafoni uye dzimba dzakangwara. Kunyangwe mota ikozvino dzave neanopfuura mamirioni zana emitsetse yekodhi.
Izvo zviitiko zvepurojekiti zvinoburitswa pasi peiyo Apache 2.0 rezinesi uye maseteti edata anotarisirwa kuburitswa munzvimbo yeruzhinji.
Iyo mienzaniso yakatsanangurwa uye inoita akafanana algorithms mune akasiyana epurogiramu mitauro. Iyo seti yakatarwa inofanirwa kubatsira kudzidzisa michina yekudzidzira masisitimu uye kusimudzira hunyanzvi mumunda we otomatiki kodhi dudziro uye ongororo, nekufananidza nenzira iyo iyo ImageNet dhatabhesi yemifananidzo yakadomwa yakabatsirwa mukuvandudza masystem ekuratidzwa kwemifananidzo uye chiratidzo chekunyepedzera. Makwikwi akasiyana epurogiramu anotaurwa seimwe yezvinhu zvikuru zvekuvaka chivakwa.
Project CodeNet inogona kunyatso tungamira algorithmic hunyanzvi kuti ubvise iyi mamiriro nekuteedzana-ne-kuteedzana mamodheru, senge zvatakashandisa mumitauro yevanhu, kugadzira dent inonyanya kukosha mukunzwisisa kwemuchina kodhi pane kugadzirisa kodhi. Kodhi muchina .
Kusiyana nevashanduri vechinyakare zvinoenderana nemitemo yeshanduro, muchina wekufunda masisitimu anogona kutora uye kutora mamiriro mamiriro ekushandisa kodhi. Pakushandura kubva kune mumwe mutauro wehurongwa uchienda pane mumwe, mamiriro acho ezvinhu akakosha sekushandura kubva kune mumwe mutauro uchienda kune mumwe. Iko kushomeka kwekuziva kwemamiriro ezvinhu kunodzivirira kodhi kubva pakutendeuka kubva mumitauro yenhaka senge COBOL.
Kuvapo kwenzvimbo hombe yekushandisa algorithm mumitauro yakasiyana siyana kunobatsira kugadzira masisitimu ekudzidza emuchina, ayo panzvimbo pekushandura mhenyu pakati pemitauro yakatarwa, vanomiririra kodhi yekodhi, yakazvimiririra pamitauro yakatarwa.
Sisitimu yakadaro inogona kushandiswa semuturikiri iyo inoshandura kodhi yakafambiswa mune chero mitauro yakatsigirwa kuva chimiro chayo chemukati, kubva kune iyo kodhi mumitauro yakawanda inogona kugadzirwa.
Kusanganisira iyo system iwe yaunogona kuita bidirectional shanduko. Semuenzaniso, mabhangi nemasangano ehurumende anoramba achishandisa enhaka COBOL mapurojekiti. Mushanduri wekudzidza muchina anogona kushandura COBOL kodhi kuita Java mumiririri uye nekushandurudza snippet yeJava kudzokera kuCOBOL kodhi.
Pamusoro pekushandurwa pakati pemitauro, nzvimbo dzekushandisa dzeCodeNet dzinotaurwa sekusikwa kweakangwara kodhi yekutsvagisa masisitimu uye otomatiki ekuona kwecone, pamwe nekuvandudzwa kweanogonesa uye masisitimu ekugadzirisa otomatiki kodhi.
Kunyanya Iyo mienzaniso yakaratidzwa muCodeNet inopihwa metadata inotsanangura mhedzisiro yemayedzo ekuita, saizi yechirongwa chinoguma, ndangariro yekushandisa uye nyika iyo inobvumidza kusiyanisa kodhi chaiyo kubva kune iyo kodhi ine zvikanganiso (kusiyanisa kodhi chaiyo kubva kune isiriyo kodhi, mienzaniso ine zvikanganiso zvakanyanyo kuverengerwa muunganidzwa, uyo mugove 29,5, XNUMX%).
Muchina wekufunda muchina unogona kutora iyi metadata kuverengera kuti inyatsoita yakanyanya kunaka kodhi kana kuona kudzokorodza mune yakaongororwa kodhi (iyo sisitimu inogona kunzwisisa kuti iyo algorithm haina kunyatso kuitiswa mune inopfuudzwa kodhi kana ine zvikanganiso).
Finalmente Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezveCodeNet, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » CodeNet, chirongwa cheBMM chemashini ekufunda masisitimu